सहभागीहरूको लागि मानक सर्वेक्षणहरू बोरिंग छन्; त्यो परिवर्तन गर्न सक्छ, र यो परिवर्तन हुनुपर्छ।
अब सम्म, मैले तपाईंलाई सोध्न नयाँ दृष्टिकोणको बारेमा बताएको छु कि कम्प्यूटर-प्रशासित साक्षात्कारहरू द्वारा सहभागी छन्। तथापि, एक कम्प्यूटर-प्रशासित साक्षात्कारको उल्टो साक्षात्कार भनेको उत्प्रेरित र सहयोगको लागि सहयोग गर्न कुनै मानव साक्षात्कारकर्ता होइन। यो एक समस्या हो किनकी धेरै सर्वेक्षणहरू दुवै समय-उपभोग गर्दै र उबाऊ हुन्छन्। त्यसैले, भविष्यमा, सर्वेक्षण डिजाइनरहरू आफ्ना सहभागीहरू वरिपरि डिजाइन गर्न र प्रश्नहरूको जवाफ अझ बढी मनोरञ्जन र खेल जस्तै बनाउन तयार हुन्छन्। यस प्रक्रियालाई कहिलेकाहीँ व्याकरण भनिन्छ।
फ्रान्ससेन्सनमा फेसबुकको रूपमा प्याकेज गरिएको एउटा सर्वेक्षणमा हामी फ्रान्ससेनसलाई विचार गरौं। Sharad Goel, शीतकालीन मेसन, र डंकन वाट्स (2010) तिनीहरूले मित्र जस्तै हो धेरै मानिसहरू कसरी लाग्छ अनुमान गर्न चाहन्थे र कति तिनीहरूले मित्र जस्तै वास्तवमा छन्। वास्तविक र बुझिएको रवैया समानताको बारेमा यो प्रश्न प्रत्यक्ष रूपमा मानिसहरूको सामाजिक वातावरणलाई बुझ्नको लागि क्षमता र राजनीतिक ध्रुवीकरण र सामाजिक परिवर्तनको गतिशीलताको लागी सम्भावना छ। अवधारणात्मक, वास्तविक र बुझिएको रवैया समानता एक उपाय गर्न सजिलो छ। शोधकर्ताहरूले धेरै मानिसलाई उनीहरूको विचारको बारेमा सोध्न सक्थे र त्यसपछि आफ्ना साथीहरूलाई उनीहरूको राय (यो वास्तविक रवैया सम्झौताको मापदण्डको लागि अनुमति दिन्छ) को बारेमा सोध्दछन्, र उनीहरूले धेरै साथीहरूलाई आफ्नो साथीको दृष्टिकोण अनुमान गर्न सक्दछन् (यसले मानसिक रवैया सम्झौताको मापदण्डको लागि अनुमति दिन्छ। )। दुर्भाग्यवश, यो प्रतिक्रियावादी र उनको मित्र दुवै साक्षात्कार गर्न तार्किक रूपमा धेरै गाह्रो छ। यसैले, गोएल र सहकर्मीहरूले आफ्नो सर्वेक्षणलाई फेसबुक एपमा खेलेका थिए जुन खेल्न थालिन्।
एक सहभागीकर्ता एक शोध अध्ययनमा सहमति लिए पछि, एपले एक जनालाई प्रतिवादीको फेसबुक खाताबाट चयन गरे र त्यस मित्रको मनोवृत्तिबारे प्रश्न सोध्यो (चित्र 3.11)। अनियमित रूपमा चयन गरिएका साथीहरूको बारेमा प्रश्नहरूको साथमा अन्तर्वार्ता दिइयो, प्रतिवादीले पनि आफुका प्रश्नहरूको जवाफ दिए। एक मित्रको बारेमा प्रश्नको जवाफ दिएर, उत्तरदायीलाई भनिएको थियो कि उनको जवाफ सही थियो वा, यदि उनको मित्रले जवाफ दिएन भने, प्रतिवादीले आफ्नो मित्रलाई भाग लिन प्रोत्साहित गर्न सकेन। यसैले सर्वेक्षण वायरल भर्ती मार्फत फैलिएको छ।
चित्रा 3.11: फ्रान्सिस अध्ययनका इन्टरफेस (Goel, Mason, and Watts 2010) । शोधकर्ताहरु लाई एक मज्जा, खेल जस्तै अनुभव मा मानक रवैया सर्वेक्षण गरे। एपले सहभागितालाई दुवै गम्भीर प्रश्नहरू र अधिक हल्का प्रश्नहरू जस्तै, यस छविमा देखाइएको एक जनालाई सोधे। साथीहरूको अनुहार जानबूझेर ब्लर गरिएको छ। शारद गोल देखि अनुमति द्वारा पुन: उत्पन्न।
मनोवृत्ति प्रश्न सामान्य सामाजिक सर्वेक्षण बाट अनुकूलित गरियो। उदाहरणका लागि, "के [तपाईंको मित्र] मध्य पूर्व अवस्थामा फिलिस्तीनियनहरू भन्दा बढी इजरायलहरूसँग सहानुभूति छ?" र "के [तपाईंको मित्र] सार्वभौमिक स्वास्थ्य हेरविचार प्रदान गर्न सरकारको लागि उच्च कर तिर्नुहुन्छ?" यी गम्भीर प्रश्नहरूको शीर्षमा अधिक शोधकर्ता प्रश्नहरु मा मिश्रित शोधकर्ताओं: "के [तपाईंको मित्र] बियर मा शराब पी लो?" र "के [तपाईंको मित्र] को बजाय मस्तिष्क को पढने को लागि शक्ति को बजाय, पढने को शक्ति छ?" यी हल्का दिल दिए प्रश्नहरु सहभागिताहरूको लागि थप मनोरञ्जन प्रक्रिया र एक रोचक तुलना पनि सक्षम पारियो: रुचाइ सम्झौताको गम्भीर राजनीतिक प्रश्नहरूको लागि र पिउने र सुपरपावरको बारेमा हल्का प्रश्नहरूको लागि?
अध्ययनबाट तीन मुख्य परिणामहरू थिए। पहिलो, मित्रहरू अजनबहरूको भन्दा उस्तै उत्तर दिन सम्भव थियो, तर घनिष्ठ मित्रहरू अझै पनि प्रश्नहरूको लगभग 30% मा असहमत थिए। दोस्रो, उत्तरदायीहरूले आफ्ना साथीहरूसँग आफ्नो सम्झौतालाई अधिकृत गरे। अन्य शब्दहरूमा, साथीहरूको बीचको अवधारणाको विविधताको विविधता उल्लेख गरिएको छैन। अन्ततः, सहभागीहरू राजनीतिको गम्भीर विषयहरूमा आफ्ना साथीहरूसँग असहमत हुन थाल्नुको साथै पेय र सुपरपावरको बारे हल्का समस्याहरूसँग।
यद्यपि एप दुर्भाग्यवश अब प्ले गर्न उपलब्ध छैन, यो एक राम्रो उदाहरण थियो कि शोधकर्ताहरू कसरी मानक रवैया सर्वेक्षण गर्न रमाइलो गर्न सक्दछन्। अधिक सामान्यतया, केहि रचनात्मकता र डिजाइन कार्यको साथ, यो सर्वेक्षण प्रतिभागिहरु को लागी प्रयोगकर्ता-अनुभव सुधार गर्न सम्भव छ। त्यसोभए, अर्को पटक तपाई सर्वेक्षण गर्दै हुनुहुन्छ, एक सहकार्यको लागि सोच्नु होस् कि तपाईका सहभागिताका लागि अनुभव अझ राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। केहि डर लाग्न सक्छ कि ग्याममेन्ट तिर यी चरणले डेटा गुणस्तरमा असर पार्न सक्दछ, तर मलाई लाग्छ कि ऊबको सहभागिताले डेटा गुणस्तरको खतरा बढाउँछ।
गोएल र सहकर्मीहरूको कामले अर्को खण्डको विषयलाई पनि चित्रण गर्दछ: सर्वेक्षणहरू लिङ्क गर्न ठूलो डेटा स्रोतहरूमा। यस मामला मा, फेसबुक संग आफ्नो सर्वेक्षण जोडने को द्वारा शोधकर्ताओं को स्वचालित रूप देखि प्रतिभागिहरु को दोस्तों को एक सूची मा पहुँच भएको थियो। अर्को खण्डमा हामी सर्वेक्षणहरू र ठूला डेटा स्रोतहरू बीचको विस्तृत विवरणमा लिङ्कहरू विचार गर्नेछौं।